Baroor diiq Sedax Maalmood soconeysa oo maanta ka bilaabatay dalka Nigeria – SBC
Baroor diiq Sedax Maalmood soconeysa oo maanta ka bilaabatay dalka Nigeria
Lagos:- Dalka Nigeria ayaa waxaa ka bilowday baroordiiq Saddex maamlmood ah xilli kooxaha gargaarka ay soo saareen meydadka inkkabadan 60 ruux taas oo ka dambeysay shilkii diyaaradeed ee dadka tirada badan ku waxyeeloobeen ee ka dhacay dalka Nigeria.
Madaxwaynaha dalka Nigeria Good Luck Jonathon ayaa ku dhawaaqay saddex maalin oo borordiiq ah oo loo sameenayo ku dhawaad 153 ruux oo ku naf waayay shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Lagos ee ku taala waqooyiga dalka Nigeria.
Diyaaradda oo nooceedu ahaa DC-10 ayaa waxaa maamulayay shirkadda India laga leeyahay ee Dana Air waxaana ay ka duushay caasimadda Abuja markii ay ku burburtay xaafado ku taalla magaalada uuna dab qabsaday.
Bishii hore ayaa diyaarad la mid ah oo ay leedahay Dana Air dhibaato farsamo ay soo wajahday oo lagu qasbay in ay si deg deg ah u fariisato magaalada Lagos.
Kumanaan ruux oo qaarkood ay ilmeenayeen ayaa isugu soo baxay goobta ay ku bur burtay diyaaradda , waxana haatan socda baaritaano ku aadan waxa dhaliyay bur burka diyaaradda.